AJAX, तपाईंको पूर्ण सुरक्षा प्रणाली | ग्याजेट समाचार
AJAX, तपाईंको पूर्ण सुरक्षा प्रणाली
हामी संग छ देखे र प्रयास गर्नु हाम्रो वेबसाइट मा बहु क्यामेरा वाइफाइ जडानको साथ भिडियो त्यो एक सुरक्षा प्रणाली को रूप मा कार्य गर्दछ। स्ट्रिमि connection जडान, र केहि अनुप्रयोगहरूको लागि धन्यवाद, हामीसँग प्रत्यक्ष छविहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। Ajax एक कदम अगाडि जान्छ र हामीलाई प्रदान गर्दछaधेरै पूर्ण किट सुरक्षा जसले हाम्रो घर धेरै सुरक्षित बनाउँदछ।
मोशन सेन्सर र रात्रि दृष्टि संग क्यामेराहरू जब हामी चाहन्छौं निश्चित ठाउँ नियन्त्रण गर्ने संभावना प्रदान गर्दछ। तर Ajax सुरक्षा प्रणाली छ १० अलग अलग कम्पोनेन्टहरू मिलेर मिलेको छ कि एक साथ जोडिएको शक्तिशाली, राम्रो सिंक्रनाइज़ नेटवर्क। उपकरणहरूको सेट जुन फारम गर्दछ एक वास्तविक सुरक्षा प्रणाली.
1 AJAX, सम्भवत सबै भन्दा राम्रो घर सुरक्षा प्रणाली
2 हामी प्रत्येक कम्पोनेन्टको विश्लेषण गर्दछौं
2.1 मुख्य आधार हब २
2.2 HomeSiren स्पिकर
2.4 लीकप्रोटेक्ट डिटेक्टर
2.8 ताररहित किबोर्ड
2.9 SpaceControl र बटन
3 AJAX, न्यूनतम स्थापना र अधिकतम स्वायत्तता
4 वाइफाइ वा ब्लुटुथ? कुनै पनि होईन
5 AJAX, सुरक्षा प्रणाली तपाईले खोज्नु भएको थियो
6 AJAX सुरक्षा प्रणालीको पेशेवरहरू र विपक्षहरू
AJAX, सम्भवत सबै भन्दा राम्रो घर सुरक्षा प्रणाली
हामीले केही हप्ता पहिले एजेक्सले प्रस्ताव गरेको पूर्ण घर सुरक्षा किट प्राप्त गर्‍यौं। एक धेरै पूर्ण प्याक जुन हामी भन्छौ, छ १० तत्वहरू, जसमा हामी थप थप्न सक्छौं हाम्रो आवश्यकता अनुसार, जो एक अर्कासँग मिलेर पूरै पूरक हुन्छ बजारमा घर अलार्म को सबै भन्दा पूर्ण र उन्नत सेट.
तपाई चाहानुहुन्छ Ajax सुरक्षा प्रणाली खरीद गर्नुहोस्? अब तपाईं यो लिंकबाट यो किन्न सक्नुहुन्छ.
हामी यस चाखलाग्दो किटको अंश-अंश विश्लेषण गर्ने छौं जुन कुनै श doubt्का बिना, हाम्रो घरमा अलार्म पाउन हामीले मासिक तिर्नु पर्ने मूल्यहरू हेर्दैपरिणाम वास्तवमै चाखलाग्दो। हामीसँग हाम्रो घरको लागि चाहिएको संरक्षण हुनेछ शुल्कको आवश्यक पर्दैन, एक महान लगानी पनि रहन्छ।
हामी प्रत्येक कम्पोनेन्टको विश्लेषण गर्दछौं
यो घरको अलार्म किटमा फेला परेका प्रत्येक तत्त्वहरूको सूची लिने समय हो। अर्को हामी तपाईलाई बताउँदछौं कि हामीले भेट्ने सबै कम्पोनेन्टहरू के हुन् र ती प्रत्येकको लागि के हो।
मुख्य आधार हब २
Es सम्पूर्ण टीमको मस्तिष्क। यो संग वायर्ड इन्टरनेट जडान र तपाईंलाई एक पावर कर्ड पनि चाहिन्छ। उही हो र केवल उपकरण जसलाई बिजुली चाहिन्छयद्यपि धेरै एक संग सुसज्जित छ स्वायत्तताको १ hours घण्टा सम्मको ब्याट्रीके त्यहाँ चलिरहन्छ यदि त्यहाँ एक बिजली आउटेज छ। पनि छ दुई सिम कार्ड स्लटहरू यसले तपाईंलाई भर पर्न सक्छ नेटवर्क बिना कनेक्टिविटी। हब २ आधारमा जहाँ बाकी तत्वहरूको प्रत्येक घर नेटवर्क सिर्जना गर्न जडान सुरक्षा को।
यसको आफ्नै नामले यसलाई संकेत गर्दछ, स्पेनिशमा यो केहि यस्तो हुनेछ "डोमेस्टिक साइरन"। यो एक हो सानो आकारको स्पिकर, बाँकी कम्पोनेन्टहरू जस्तै वायरलेस। जब एक घुसपैठ, कुनै पनि सेन्सर अनाधिकृत पहुँच सार्छ, वा हामीले कन्फिगर गरेकोमा निर्भर गर्दै प्रणाली सक्रिय हुन्छ चर्को अलार्म। कार्यहरू स्पष्ट छन्; यदि हामी घरमा छौ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्। र एकै समयमा सम्भावित घुसखोरहरूलाई रोक्नको रूपमा काम गर्दछ.
एक राम्रो सुरक्षा प्रणाली दुबै बाह्य र आन्तरिक खतराबाट हामीलाई जोगाउँदछ। Ajax होम प्रणाली पनि छ आगो संरक्षण। हामी संग डिटेक्टर आगो धूम्रपान गर्न स्वत: प्रतिक्रिया गर्दछ, साथै तापमानमा ठूलो वृद्धि। यो उपकरण पनि गणना गर्दछ यसको आफ्नै श्रव्य अलार्मको साथ त्यसले धूम्रपान वा आगोबाट खतरा हुने स्थितिमा हामीलाई सचेत गराउँछ।
Ajax पनि उसको बारेमा सोच्छ जोखिम जुन हाम्रो घर पानी चुहावट र बाढीबाट ग्रस्त हुन सक्छ। यो एक डिटेक्टर यो डिजाइन गरिएको छ बाढी जोखिम क्षेत्रहरूमा पत्ता लगाउनउदाहरण को लागी, घरेलु उपकरणहरु पछाडि जस्तै कि धुने मेसिन। यसको विशेष सेन्सरलाई धन्यवाद यो पानी पत्ता लगाउँछ जब स्वचालित रूपमा सूचित हुनेछ त्यसैले ढिलो हुनु भन्दा पहिले हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौं।
डोरप्रोटेक्ट एक हो आधारभूत एपर्चर सेन्सर। यसको लागि प्रयोग गरिएको छ ढोका र विन्डोज खोल्ने वा बन्द गर्ने नियन्त्रण गर्नुहोस्। यद्यपि एक मात्र यो किटमा आउँदछ, धेरै थप्न सकिन्छ र घरको सम्भावित प्रवेश द्वारहरूमा पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा सबैभन्दा पहुँचयोग्य विन्डोहरूमा। यदि कुनै ढोका वा विन्डो खुल्छ भने se सूचित गर्नेछ प्रणालीमा स्वचालित रूपमा सेन्सरको चेतावनी सक्रिय पारिएको छ।
यहाँ हामी फेला पार्दछौं अन्य गति सेन्सर, तर यस अवस्थामा धेरै धेरै उन्नत। अलार्म प्रमाणित गर्न मोशन क्यामसँग फोटो क्यामेरा छ। एक पटक डिटेक्टर ट्रिगर भयो, बहु फोटो लिनुहोस् ताकि मालिक र सुरक्षा कम्पनी (यदि कुनै हो भने) यो निश्चित गर्न सकिन्छ कि यो घुसपैठ वास्तविक हो वा यदि अलार्म केही लापरवाहीद्वारा ट्रिगर गरिएको थियो। प्रस्तावहरू 640१२० 480२००० रिजोलुसन। र यो एक छ बदल्न योग्य ब्याट्री जुन4बर्ष सम्मको जीवनको प्रतिज्ञा गर्दछ.
यो मात्र होइन स्मार्ट प्लग हामी मार्केटमा फेला पार्न सक्ने धेरै प्रयोग गर्न। कुनै पनि समयमा यसलाई सक्रिय गर्न वा यसको उपयोग तालिका गर्न सक्षम हुनुको साथै, यससँग अधिक कार्यक्षमताहरू छन्। र यो त्यो सकेट हो, अरु के छ त, Nos ऊर्जा खपत को अनुगमन प्रदान गर्दछ.
यो हो प्रणाली नियन्त्रण कुञ्जीपाटी कि हामी घरको प्रवेश द्वारमा पत्ता लगाउन सक्छौं, तर पनि हामी हामीलाई घरको कुनै पनि ठाउँमा लैजान सक्छौं र यो सामान्य रूपमा कार्य गर्दछ। यसको पहुँच र पातलो र हल्का डिजाइनको पोर्टेबिलिटीको अर्थ यो हो कि हामी यसलाई हामी कहाँ पाउन चाहन्छौं।
SpaceControl र बटन
अन्तिम हामीसँग छ थोरै रिमोट प्रस्ताव गर्दै पूर्ण प्रणाली नियन्त्रण। हामीले भेट्टायौं आतंक बटनवा र पनि कन्फिगर र / वा बिभिन्न अलार्म मोड सक्रिय गर्ने सम्भावना.
बटन तुरुन्त सूचित गर्नुहोस् एउटा घुसपैठ, ग्यास चुहावट वा आगोको बारेमा अलार्म प्राप्त गर्ने केन्द्रमा। एक क्लिकको साथ तपाईं चिकित्सा सहायता अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य मा अचानक बिग्रने को सूचित गर्नुहोस्
AJAX, न्यूनतम स्थापना र अधिकतम स्वायत्तता
एजेक्स होम सुरक्षा किटलाई विशेष बनाउने विवरण मध्ये एक हो यसका सबै घटकहरू वायरलेस छन्। एक नेटवर्क केबल र पावर केबल चाहिने नियन्त्रण केन्द्रको अपवाद, बाँकी हाम्रो घरको कुनै पनि ठाउँमा स्थापना गर्न वा कुनै पनि प्रकारको केबलको आवश्यकता बिना नै अवस्थित गर्न सकिन्छ। सबैसँग छ बदल्न मिल्ने आफ्नै ब्याट्री भारी अवधि को।
निर्माताले प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यावसायिक स्थापनाको लागि अप्ट इन गर्न कडा सल्लाह दिन्छ- झूटा अलार्म रोक्छ, सबै सम्भावित प्रवेश मार्गहरू कभर गरिएको सुनिश्चित गर्दछ, र इष्टतम र निर्दोष प्रणाली सञ्चालन सुनिश्चित गर्दछ.
नियन्त्रण केन्द्रमा लिंक गर्नl प्रत्येक तत्वहरू जुन यो पूर्ण किट बनाउँदछन्, हामीले अनुप्रयोगको माध्यमबाट मात्र केहि सरल चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ। ध्यान केन्द्रित गर्न को रूप मा सरल QR कोड प्रत्येक उपकरणको Ajax घर सुरक्षा नेटवर्क को हिस्सा बन्न।
विकासकर्ता: Ajax सिस्टम इंक
IOs को लागी आवेदन
वाइफाइ वा ब्लुटुथ? कुनै पनि होईन
प्रत्येक कम्पोनेन्टको बिच कनेक्टिविटी पनि ठूलो प्लस हो। एजेक्सले यसको कनेक्टिविटी आफ्नै र प्याटेन्टेड प्रणालीमा आधारित गर्दछ "ज्वेलर"। एक प्रणाली जसले स्कोपहरू प्रदान गर्दछ २००० मिटर टाढाको स्थिर कनेक्शन, एक पास छ कि ब्लुटुथले प्रस्ताव गर्न सक्ने भन्दा धेरै उत्कृष्ट, उदाहरणका लागि।
Jeweler कनेक्शन प्रोटोकल यसले थोरै शक्ति र स्वचालित डेटा ईन्क्रिप्शन खपतको फाइदा पनि प्रदान गर्दछ।। केहि परिणाममा विशाल ब्याट्री जीवन यसको कम्पोनेन्टहरूको।
AJAX, सुरक्षा प्रणाली तपाईले खोज्नु भएको थियो
जसरी हामीले तपाईलाई देखाइएको छ एजेक्सले प्रस्ताव गरेको गृह सुरक्षा प्रणाली वास्तवमै पूर्ण भयो। यसले हामीले खोजिरहेका सबै टेक्नोलोजी प्रदान गर्दछ ताकि हाम्रो घर सुरक्षित रहोस्। सम्भावित घुसखोरहरूबाट सुरक्षित, तर सम्भावित खतराहरू वा क्षतिबाट जुन तपाईं अग्नि वा बाढीबाट ग्रस्त हुन सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूसँग छ एक पेशेवर अनुगमन को विकल्प, पनि उपलब्ध छ।
यसको प्रत्येक घटकको हालको र धेरै सावधान डिजाइन। यद्यपि सुरक्षा प्रणालीको बारे निर्णय लिँदा डिजाइन विचार गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू मध्ये एक होईन, यो हेर्दा यो राम्रो लाग्दछ सबै तत्वहरू जुन यो कम्पोज गर्छन् उस्तै शैली राख्छ। सोबर र सुरुचिपूर्ण डिजाइन जुन कहिँ पनि टल्नेछैन।
una द्रुत र सजिलो स्थापना कसैको पहुँच भित्र। एक धेरै पूर्ण अनुप्रयोग र यसको मार्फत कनेक्टिभिटी र स्थापना प्रणाली जसले यसको प्रयोग सहज र सजिलै कन्फिगर योग्य बनाउँदछ।
AJAX सुरक्षा प्रणालीको पेशेवरहरू र विपक्षहरू
El डिजाइन प्रत्येक तत्वको एक बचत गर्दछ सममित र सुरुचिपूर्ण रेखा दुई र colorsहरू उपलब्ध छन्; कालो वा सेतो
को अवधि स्वायत्तता तपाईंको ब्याट्री वर्ष मा मापन गरिएको छ।
सबै वायरलेस तत्वहरू २००० मिटरको दायराको साथ Jeweler प्रविधिलाई धन्यवाद।
ताररहित कनेक्टिविटी र दायरा
यद्यपि तिनीहरूसँग धेरै स्वायत्तता छ, तिनीहरूको ब्याट्री रिचार्जेबल हुँदैनन्.
गैर रिचार्जेबल ब्याट्री
AJAX घर सुरक्षा प्रणाली
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » AJAX, तपाईंको पूर्ण सुरक्षा प्रणाली
प्रोग्रामहरू नि: शुल्क कम्प्यूटर प्रदर्शन अनुगमन गर्न
PS4 मा नि: शुल्क खेलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, यसलाई सरल चरणहरूमा कसरी गर्ने